Ikhaya elihle le-6BR/3.5BA eduze neNtaba yaseStone - I-Airbnb
Ikhaya elihle le-6BR/3.5BA eduze neNtaba yaseStone
Conyers, Georgia, i-United States
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Kate
Indlu yethu eyi-6 BR/3.5 BA ihlala endaweni yethu enhle eyi-1.38 acre. Sitholakala endaweni ephephe ngokwedlulele enenqwaba yokwenza endaweni eseduze!
Amalambu e-UV afakwe kumasistimu ethu e-HVAC ukuze ahlanze umoya. Silandela imihlahlandlela ye-CDC yokuhlanza indlu, njengokuphrakthiza ukuhlanza izindawo ezivame ukuthintwa (isibonelo: amatafula, othaqa basekhishini, izibambo zomnyango, amaswishi okukhanya, izibambo, izindlu zangasese, ompompi, osinki) ngezinto zokusula ezibulala amagciwane. Hlanza indlu yokugezela nge-bleach equkethe isisombululo. Wonke amalineni asanda kuwashwa futhi agoqwe ekhabetheni lelineni futhi yonke imibhede yenzelwe isivakashi ngasinye. Ishampoo, insipho, insipho yesandla kanye nesibulali magciwane, izicubu zobuso, izicubu zokugezela, amathawula ephepha, ne-bleach. Sicela uqhubeke nokuqhelelana nabantu!!!
I-Master Suite inombhede omkhulu wokunethezeka nokunethezeka, kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba esingu-48 intshi egcwele ikhebula. I-Master Bath inobhavu wokugeza onamajethi, ishawa ehlukile, kanye nekhabethe elimangalisayo lokungena. Uhlaka lokuphepha lwendlu yangasese ye-RMS kanye nojantshi kuyatholakala ngendlu yangasese noma ishawa.
Igumbi lethu lokuphumula liza nesikrini esiyisicaba esingamayintshi angu-46, umsebe oluhlaza okwesibhakabhaka, kanye nosofa omkhulu wesigaba esingahlala kuwo.
Ikhishi lethu lihlome ngakho konke ongase ukudinge ukuze wenze ukudla okumnandi kweqembu lakho.
Sinesistimu ye-alamu entsha yesimanjemanje enokhiye ohlakaniphile kanye nekhamera yokuphepha ukuze izihambeli zethu ziphephe.
I-Bedroom 1 iza nombhede olingana neKing kanye ne-TV/DVD engu-48 inch flat.
I-Bedroom 2 iza nombhede ogcwele kanye ne-TV/DVD eyi-inch engama-48 inch
I-Bedroom 3 iza nombhede wendlovukazi kanye ne-TV eyi-48" Flat.
Igumbi lokulala lesi-4 linombhede ophelele, umbhede oyiwele, nombhede ongaphansi (amawele phezulu futhi agcwele phansi, alungele izingane)
Kunamakamelo okulala angu-2 ngaphezulu anemibhede eyindlovukazi kanye nama-HDTV amakhulu angu-2 efulethini elingaphansi, kanye nezindawo zokulala ze-ottoman. Indawo yokulala ye-Futon yesikhumba nayo isendlini yokuphumula eyinhloko.
Isitezi esikhulu sine-grill yamalahle kanye ne-4 burner propane grill yangaphandle kanye nesethi ye-dinette yezihlalo ezi-4.
Uma unemibuzo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi!
INDAWO YOKUPAKA: Izimoto eziyisi-7 zokuqala azinandawo yokupaka. Indawo yokupaka eyengeziwe izoba ngu-$25 ngemoto ngayinye.
ubusuku obungu-7 e- Conyers
4.68 · 112 okushiwo abanye
Ukuhamba cishe imizuzu engama-30 ukusuka edolobheni lase-Atlanta, nokufinyelela kalula kuyo yonke imigwaqo emikhulu. Ukushayela ngaphandle kwethrafikhi ukuya esikhumulweni sezindiza kuyimizuzu engama-25-30 kuphela.
Siphinde sitholakale ngemoto eyimizuzu eyi-15 ukusuka eStone Mountain Park. Phakathi nezinyanga zasebusika, ungaya eqhweni noma ngeshubhu, futhi phakathi nezinyanga zasehlobo, kunemikhosi eminingi nezinye ezikhangayo zasehlobo. Intaba iphinde inikeze uhambo olujabulisayo.
Siyimizuzu emi-5 ukusuka ezinkundleni zegalofu zomphakathi ezimbili.
Indawo yethu iphephe kakhulu futhi ifaka isistimu yokungena engenakhiye ukuze uthole ukuvikeleka okwengeziwe.
Izivakashi zingajabulela isikhathi sazo sangasese ngesikhathi sokuhlala kwazo.
Asibingeleli izivakashi zethu lapho zingena noma ngesikhathi sokuhlala kwazo. Umuntu osebenza ngezandla uhlala eduze futhi uyatholakala uma kudingeka.